Weeraro isku mar bilowday oo caawa ka dhacay Muqdisho | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Weeraro isku mar bilowday oo caawa ka dhacay Muqdisho
Dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa caawa weeraray laba bar kontorol oo ku yaalla duleedka Magaalada Muqdisho.
Weeraradan ayaa isku mar lagu qaaday fariisin ciidanka dowladdu ku leeyihiin Siinka-dheer iyo fariisin kale oo ciidamo Nabad sugid ah ku leeyihiin xaafada Galmudug oo ka tirsan degaanka Garasbaaley.
Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada degaanka Garasbaaley ayaa sheegay in ciidamada amaanku iska difaaceen raggii weerarka soo qaaday, ayna khasaare gaarsiiyeen, isagoo xusay in hal askari uu weerarka dhankooda kaga dhaawacmay.
Shacabka ku dhaqan degaanada weeraradan ay ka dhaceen ayaa mar kaliya dareemay cabsi, iyagoo ka argagaxay rasaasta oo halmar is qabsatay, balse xaalada goobaha ay weeraradan ka dhaceen ayaa hadda waxay tahay mid degan.
Ma jiraan warar madax banaan oo ka hadlaya khasaaraha rasmiga ah ee weeraradan caawa ka soo gaaray labada dhinac iyo shacabka degaanadaas ku dhaqan.
Xalay ayeyna aheyd markii Al-shabaab ay weeraro isugu jira qaraxyo bambooyin iyo duqeymo ka geysatay magaalada Muqdisho, iyadoo kooxdan looga bartay iney weeraradooda xoojiyaan bisha Ramadaan marka la soo gaaro.